दु:खद खबर ! रविले गरे श्रमतिको ह.त्या,शब लुकाउदा लुकाउदै रवी सहित प्रहरी फ!न्दामा -
दु:खद खबर ! रविले गरे श्रमतिको ह.त्या,शब लुकाउदा लुकाउदै रवी सहित प्रहरी फ!न्दामा
१३ माघ,काठमाडौं – पत्नीको शव लुकाउन खोज्दा बारा श्रीपुरका रवि चौधरी प,,क्राउ परेका छन्। कुट,पिटबाट मृ,त्यु भएकी बबिता चौधरीको श,व जलाउन नसकेपछि खाल्टो खनेर पुर्न खोज्दा सोमबार रवि प,क्राउ परेका हुन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले रवि र उनीसँगै गौशालाकी अनु थापालाई प,क्राउ गरेको छ। वृत्तका प्रहरी निरीक्षक जनक ढुंगानाका अनुसार गत शुक्रबार बबिताले अनुको मोबाइल चो,री गरेकी थिइन्। रवि र बबिता पशुपतिस्थित राममन्दिर नजिकैको सत्तलमा बस्दै आएका थिए।
चोरी भएको मोबाइल रंगेहात फे,ला पारेपछि अनुले केही साथीको सहयोगमा बबितालाई कु,टपिट गरेकी थिइन्। कुट,पिटबाट बबिताको आँखा र टाउकोमा गम्भीर चो,ट लागेको प्रहरी निरीक्षक ढुंगानाले जानकारी दिए। उनले भने,‘बबिताको कुट,पिटबाट मृ,त्यु भएको देखिन्छ। घट,ना भएपछि बबिताका श्रीमान रविले प्रहरीमा खबर गर्नुको साटो ढाकछोप गरेर लुकाउन खोजेपछि प,क्राउ गरेका हौं।’ रविले अनुकै सल्लाहमा सुरुमा बबिताको श,व जलाउन खोजेका थिए। जलाउन सम्भव नभएपछि खाल्डो खनेर गा,ड्न लागेको आशंका प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीले घट,नास्थल नजिकै बबिताको श,व लुकाउन खोजिएको खा,ल्डोसमेत फे,लापरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ।
Previous नागरिक माथि प्रहरी हस्तक्षेप ! दाहाल सहित १२ जना घा,ईते-झन्डै गयो ज्यान
Next करणी अभियोगमा भाईरल अर्जुन बिक प!क्राउ,श्रमति माथि सबै झुठो बोलेको ठहर,नालीबेली प्रदा.फास